Malagasy miara-miainga : « Tsy rariny intsony izao… fahendren’ny mpitondra ny miala” | NewsMada
Malagasy miara-miainga : « Tsy rariny intsony izao… fahendren’ny mpitondra ny miala”
Nampahatsiahy amin’ny mpitondra ny tsy mbola namaliana ny fangatahany ny antoko Malagasy miara-miainga, omaly, teny Ankerana. Nitondran’izy ireo ny heviny koa ny momba ny fiainam-pirenena.
“Tsy rariny intsony izao… Mijaly ny vahoaka; tsy misy intsony ny fanarahan-dalana. Mila mahatsiaro tena ireo mpitondra satria tsy ao aminy intsony ny fitokisan’ny vahoaka. Fahendrena ho azy ireo ny mametra-pialana… Aleo miala raha misy ihany ny fitiavana ny tanindrazana mba tsy hisian’ny korontana eto amin’ny firenena”, hoy ny filohan’ny antoko malagasy miara-miainga, Andrianainarivelo Hajo. Notsiahiviny fa efa niteny daholo ny rehetra amin’ny tsy fandehanan’ny raharaham-pirenena.
Nambarany koa fa efa nivoaka ny fanambaran’ny HCC momba ny fanoherana ka nilazana fa tokony hijoro izany ary hamboarina ao anatin’ny fotoana fohy . “Lasa ihany ny iray volana fa tsy nanao na inona na inona ny fanjakana. Efa nandefasana taratasy ny filoham-pirenena, ny filohan’ny Antenimiera ary ny lehiben’ny governemanta milaza amin’izy ireo mba handray fepetra momba ny fanapahana noraisin’ny HCC”, hoy ihany izy. Manoloana izany, nanambara ny Malagasy miara-miainga fa efa tapitra ny fotoana fiandrasana ka rehefa tsy afaka maneho hevitra ara-dalana, azo atao ny maneho hevitra amin’ny sehatra rehetra manomboka izao. “Aoka tsy hifampiteniteny intsony mihitsy. Miteny koa ianareo mpitandro filaminana fa tsy fanao ny maneho hevitra an-dalambe satria tsy ara-dalàna. Ny tsy fanekena ny fanoherana tsy ara-dalàna; ny tsy fanajana ny lalàmpanorenana koa tsy ara-dalana ka tokony hosamborina ireo… Sao mifandiso ny tokony hosamborina.. Jerenareo fotsiny ny tsy manara-dalàna”, hoy Andrianainarivelo Hajo.
Nampitandrina fa mbola hiteny ny vahoaka…
Nitodika amin’ireo mpiara-miombona antoka koa ny tenany avy eo mba tsy hitongilana fa handinika ny tokony hatao. “Fanjakana tsy manaiky ny hisian’ny mpanohitra ny eto… Mitovy hevitra amin’ny Vondrona eoropeanina (UE) koa izahay hoe malalaka ny fifidianana, mitovy hevitra aminy hoe atsangano ny HCJ, hitsarana ny mpitantana rehetra… Tokony hotohizana hatramin’ny farany izany araka ny voalazan’ny satan’ny UE amin’ny fametrahana ny fanjakana tan-dalàna… “, hoy izy. Nohitsiny fa tokony hotanterahina ireo fepetra ireo. Tsy mitady toerana ny antokony, araka ny nambarany fa hanavotra ny firenena sy hametraka fifanakalozan-kevitra madio ahafahana maneho hevitra an-kalalahana satria manana vina sy fomba fijery hampandrosoana ny firenena.
Ankoatra izany, nampitandrina ny Malagasy miara-miainga. “Mbola hiteny ny vahoaka rehefa tonga ny fotoana. Hiteny izy fa azy ny fahefana ka izay tiany no hanaovana azy…”, hoy izy.